Thwebula Panda Antivirus 2015 15.0.1 Gold, Global... – Vessoft
Thwebula Panda Antivirus
Panda Antivirus – isofthiwe yakhelwe ukuthola abhubhise amagciwane. Isofthiwe ivikela computer ngokumelene amagciwane, spyware, trojans, izimpethu, kanye nezinye izingozi. Panda Antivirus has a module eyakhelwe-kulelo kuvimbela ukufinyelela yezingane kuya abadala sites web. Isofthiwe isekela ubuchwepheshe malware ulwazi exchange phakathi abasebenzisi kwandisa ukulondeka computer ngokuzenzakalelayo. Panda Antivirus ine lemifanekiso anti-spam futhi kungenzeka ukungena kokukude.
Isivikelo izinhlobo ezahlukene izinsongo
Kuvimbela ukufinyelela yezingane kuya abadala sites web
Iskena kwamadivaysi yokugcinwa kokwaziswa
Amazwana on Panda Antivirus:
Panda Antivirus Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... Avast 12.3.3154 Free Antivirus futhi Premier; 12.1.3076 beta Internet Security...
Antiviruses Isofthiwe ukuqinisekisa ukuhlala ngiphephile internet. Amabhulokhi isofthiwe modules ukukhangisa kanye izingosi eziyingozi.
English, Українська, Français, Español... IObit Malware Fighter 4.5.0.3457
English, Français, Español, Deutsch... McAfee LiveSafe 14.0.4121
English, Français, Español, Deutsch... Download Master 6.11.1.1535 Standard futhi Portable
Downloaders The khulula thwebula manager of izinhlobo ezahlukene ifayili kusukela internet. Isofthiwe ubuyisela module standard yokulandwayo futhi inikeza kakhudlwana thwebula ijubane.
Amafayela Ithuluzi free ukulanda ulwazi ezahlukene isitoreji ifu. Isofthiwe isekela ukuvumelanisa idatha kanye exchange elula amafayela.
English, Українська, Français, Español... Tunngle 5.8.3
English, Français, Deutsch, Italiano... Doro PDF Writer 2.09